ရွေးချယ်ခြင်း – Union Civil Service Board
Union Civil Service Board
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ဆောင်ပုဒ်/ မျှော်မှန်းချက်/ ဦးတည်ချက်/ ရည်မှန်းချက်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ
Screening Test စာမေးပွဲ
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခန့်ထားနိုင်ရန် အလို့ငှာ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနသည်အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ် များကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်-
(က) ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများက ၀န်ထမ်းရွေးချယ်ပေးရန် အဆိုပြုချက်အပေါ် စိစစ်ခြင်း
( ခ) လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ခေါ်ယူခြင်း
( ဂ) ရာထူးလျှောက်လွှာများကိုလက်ခံခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း
(ဃ) ပထမအဆင့်ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) နှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
(င) အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပခြင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ဦးရေသတ်မှတ် နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
( စ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့၀င်များက လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် ဝင်ပေါက်ရာထူး အဆင့်(၆)ခုရှိရာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က) စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (အုပ်ချုပ်ရေး/လူမှုရေး) အဆင့် ၁ နှင့် ၂
( ခ) စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (စီးပွားရေး) အဆင့် ၁ နှင့် ၃
( ဂ) ပညာရှင်ဝန်ထမ်းအဆင့်- ၁၊ ၂ နှင့် ၃
(ဃ) စာရေးဝန်ထမ်းအဆင့် ၁
( င) ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် ၁ နှင့် ၃
(စ) ရုံးအကူဝန်ထမ်းအဆင့် ၁
အဆိုပါ ဝင်ပေါက်ရာထူးအဆင့်(၆)ခုအနက်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က လက်ရှိကြော်ငြာခါ်ယူရွေးချယ်ပေးလျက်ရှိသော ရာထူးအဆင့်သည် လစာနှုန်း ၂၅၀၀၀၀ိ-၄၀၀၀ိ-၂၇၀၀၀၀ိ အဆင့် ဖြစ်သော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ဝင်ပေါက်ရာထူးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အခြားကျန်ရှိသောဝင်ပေါက်ရာထူးများ အတွက်ရွေးချယ်ခန့်ထား‌ရေးကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများက နိုင်ငံတော်၏ လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ထားသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လစာနှုန်း ၂၅၀၀၀၀ိ-၄၀၀၀ိ-၂၇၀၀၀၀ိ အဆင့်ထက်မြင့်သော ရာထူးနေရာများတွင်ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်ပါကပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ အဆိုပြုညှိနှိုင်းနိုင်ပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကညှိနှိုင်းရရှိချက်ကို ဆက်လက် ထောက်ခံကာနိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း ထံတင်ပြ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ပြန်ကြားချက်များပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းများသည် ပြန်တမ်းဝင်ရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက် လစ်လပ်ရာထူးများသို့ ဖြည့်စွက်ခန့်ထားရန်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးနှင့်အကြီးအကဲ တို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လစ်လပ်ရာထူးအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူပေးရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က သက်မှတ်ထားသော အဆိုပြုလွှာ တွင်ဖြည့်စွက်၍ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရပါသည်။ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက အဆိုပြုလွှာအပေါ်အဆင့်ဆင့်စိစစ်၍သီးခြားညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရန်မရှိပါကလစဉ်ကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ခွင့်ရရှိရန် တင်ပြရပါသည်။ အကယ်၍ကြော်ငြာခေါ်ယူရန် အဆိုပြုချက်၌ ဖော်ပြချက်များသည် ထပ်မံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ပါကဝန်ထမ်းရွေး ချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။
အဆိုပါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ အတွက်ဆွေးနွေးကြရပါသည်-
(က) လျှောက်ထားသူအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ကိစ္စတွင် သတ်မှတ်ပညာအရည် အချင်းပြည့်မီသူများအတွက် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ချမှတ်ထားသော ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ၃၅နှစ်နှင့်လက်ရှိဝန်ထမ်းအတွက် ၄ဝနှစ် ထက်မကျော်လွန်ရန် ကိစ္စ
(ခ) အဆိုပြုသည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ အမျိုးသားများသာ ခန့်ထားလို ကြောင်းဖော်ပြသည့်ကိစ္စတွင် ယင်း လုပ်ငန်းသဘာဝကို စိစစ်၍ အမျိုးသမီးများလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ အကြံပြုရသည့် ကိစ္စ
(ဂ) ရွေးချယ် ခန့်ထား လိုသော ရာထူးသို့ လျှောက်ထားသူများ၏ ပညာအရည်အချင်းနှင့် ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ရိုးရိုးဘွဲ့ သို့မဟုတ် မဟာဘွဲ့သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စနှင့်သီးခြားလုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိရန်လိုသော ရာထူးများအတွက် ဘွဲ့တစ်တစ်ခုခု ရရှိရန်အပြင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရန် အဆိုပြုခြင်းကိစ္စ
ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင့် ဝင်ပေါက်ရာထူး နေရာလစ်လပ်သဖြင့် စစ်ဆေးရွေးချယ်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ အဆိုပြုချက်များ ပေးပို့ညှိနှိုင်းလာသည့်အခါ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သည်လစ်လပ်ဌာန၊ ရာထူး နေရာများအတွက် ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ကြေညာ၍ လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူပါသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာလစ်လပ်သဖြင့် ပြည်ပ စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်၍ စစ်ဆေး၊ ရွေးချယ်ပေးရန် တရားဝင်အမှာစာဖြင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့သို့ညှိနှိုင်းမေတ္တာရပ်ခံလာပါက သီးခြားအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ကြော်ငြာထုတ်ပြန် ကြေညာ၍ လျှောက်လွှာများခေါ်ယူပါသည်။
ကြော်ငြာကိုနေ့စဉ်ထုတ်ဝေသည့် ကြေးမုံနှင့်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)နေပြည်တော်၊ အမှတ်(၆၅)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရန်ကုန်ရုံးခွဲနှင့် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများ၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website နှင့် Facebook များ ဖြစ်သော www.ucsb.gov.mm, ucsb.imis.com.mm နှင့် Ucsb Myanmar Facebook တို့တွင်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမည်။
ကြော်ငြာတွင် ရာထူးလစ်လပ်သည့်ဌာန၊ ရာထူးအမည်၊ လစ်လပ်ရာထူးအရေအတွက် နေရာ၊ လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများ၊ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်၊ အသက်ကန့်သတ်ချက်၊ လျှောက်လွှာဝယ်ယူ နိုင်သည့်နေရာ၊ လျှောက်လွှာပေးပို့ရမည့်ဌာန၊ လက်ရှိအစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုစာပူးတွဲတင်ပြရန်ကိစ္စ၊ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူပူးတွဲ တင်ပြရန်ကိစ္စ၊ စာမေးပွဲကျင်းပမည့်စာစစ်ဌာန(၅)ခု၊ ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)နှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအတွက် ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာမည့် နေ့ရက်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည့်နေ့ရက်နှင့် နေရာ၊ စာမေးပွဲများကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့်နေရာ၊ ကြော်ငြာပါဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ သီးခြားစည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းနိုင်သည့် လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်တို့ကို ဖော်ပြထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကြော်ငြာပါအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်သည့် လျှောက်လွှာများကို အဆင့် (၃)ဆင့်ဖြင့် အရည်အချင်းစစ်ဆေး၍ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ရာ ပထမအဆင့်ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)၊ ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ တတိယအဆင့် စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအဆင့်ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)
ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (ScreeningTest)သို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း၊ လျှောက်လွှာတွင်မပြည့်စုံ၍ လိုအပ်ချက်ရှိသောကြောင့် ခုံအမှတ် မထွက်သူများစာရင်း၊ ကြော်ငြာပါ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် မညီညွတ်သောကြောင့် ဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများအမည်စာရင်း၊ စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေရာနှင့် အချိန်ဇယားတို့ကို ကြော်ငြာ၌ ဖော်ပြထားသည့် နေ့ရက်များတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးများရှိ ကြော်ငြာသင်ပုန်းများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website နှင့် Facebook တို့တွင် ကြေညာ၍ ကြာသပတေးနှင့် သောကြာနေ့တို့တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ [ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) သို့ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာကို တစ်ဦးချင်းထံသို့ ပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ။]
ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ကို နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မကွေးနှင့် မော်လမြိုင်မြို့များရှိ စာစစ်ဌာန(၅)ခုတွင် တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆို ခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည့် နေ့ရက်နှင့်စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၊ အချိန်တို့သည် ကြော်ငြာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ပဏာမစစ်ဆေးခြင်းတွင် Multiple Choice Question Type ကို အင်္ဂလိပ်စာဘာသာနှင့် သုတရေးရာဘာသာရပ်တို့အတွက် စုစုပေါင်းမေးခွန်း (၆၀)ပုဒ်ကို (၂)နာရီ မေးခွန်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၀:၀၀ နာရီ အထိ ဖြေဆိုချိန် (၁)နာရီဖြင့် မေးခွန်းပုဒ်ရေ(၃၀)ကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုသူများအား ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုပုံနည်း စနစ်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြရန်ရှိပါသဖြင့် နံနက် ၀၈:၃၀ နာရီတွင် စာမေး ပွဲခန်းအတွင်း၌ နေရာ ယူပြီးဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သုတရေးရာ ဘာသာရပ်ကို နံနက် ၁၀:၁၅ နာရီမှ ၁၁:၁၅ နာရီအထိ ဖြေဆိုချိန်(၁)နာရီဖြင့် မေးခွန်းပုဒ်ရေ (၃၀)ကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆို သူများအနေဖြင့် ၁၀:၀၀ နာရီမှစတင်၍ စာမေးပွဲခန်းအတွင်း၌ ပြန်လည်နေရာယူပြီးဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပဏာမစစ်ဆေးခြင်းဖြေဆိုရာတွင် အဖြေလွှာပေါ်၌ ဖြေဆိုသည့်စာစစ်ဌာန၊ ဖြေဆိုခွင့်ပြုသည့် ခုံအမှတ်၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ဖြေဆိုသည့်ရက်စွဲတို့ကို အဖြေလွှာပေါ်ရှိ သတ်မှတ်စက်ဝိုင်းအတွင်း 2B ခဲတံဖြင့်မဲနက်နေအောင် အပြည့်ခြယ်ပေးရပါမည်။ မေးခွန်းသည် Multiple Choice Question Type ဖြစ်သည့်အတွက် ပေးထားသည့် အဖြေ(၄)ခုအနက် အမှန်ဆုံးအဖြေတစ်ခုကိုသာရွေးချယ်၍ အဖြေမှန် စက်ဝိုင်းအတွင်း 2B ခဲတံဖြင့်မဲနက်နေအောင် ထင်ထင်ရှားရှား ခြယ်ပေးရပါမည်။ ရွေးပြီးသား အဖြေကိုမကြိုက်၍ အခြားအဖြေတစ်ခုကို ထပ်မံရွေးချယ်လိုပါက ရွေးပြီးသားအဖြေကို ခဲဖျက်ဖြင့် သေသပ်စွာ ဖျက်ပေး ရမည်ဖြစ်ပြီး ခဲဖျက်အစအနများမကျန်အောင် အဖြေလွှာစာရွက်ကို သန့်ရှင်းပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖြေမှန်စက်ဝိုင်းအတွင်း အပြည့်ခြယ်မထားခြင်း၊ အဖြေမှန်စက်ဝိုင်း ကို ထင်ထင်ရှားရှားခြယ် မထားခြင်း၊ ခဲဖျက်အစအနများကျန်ရှိနေခြင်း၊ အဖြေမှန်(၁)ခု ထက်ပို၍ ရွေးချယ်ဖြေဆိုခြင်းတို့အတွက် အမှတ်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
(က) အဖြေလွှာများပေါ်တွင် အစွန်းအထင်းမဖြစ်စေရပါ။
(ခ ) အဖြေလွှာစာရွက်ကို ခေါက်ခြင်း၊ ချိုးခြင်းမပြုရပါ။
( ဂ) အဖြေလွှာများကို ပျက်စီး/စုတ်ပြဲခြင်းမဖြစ်စေရန်သတိပြုပါ။
(က) အဖြေလွှာစာရွက်ပေါ်တွင် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက ခဲဖျက်သာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး Correction Pen အသုံးမပြုရပါ။
(ခ) အဖြေလွှာစာရွက်ကို ပေါက်ပြဲအောင် ခဲဖျက်ဖြင့် ဖျက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စာရွက်ပေါက်ပြဲနေပါက အဆိုပါ အဖြေအတွက် အမှတ်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ပထမအဆင့်ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test)အောင်မြင်သူများစာရင်းကို ဖြေဆိုပြီး ရက်သတ္တ (၁)ပတ် အတွင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမည်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်သူများသည် ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေ စာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအဆင့်ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test) အောင်မြင်၍ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေး ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးများရှိ ကြော်ငြာသင်ပုန်းများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website နှင့် Facebook တို့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမည်။ ဒုတိယအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည့်နေ့ရက်နှင့် စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၊ အချိန်တို့သည် ကြော်ငြာ တွင်ဖော်ပြပါရှိသည့် အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြာသပတေးနှင့် သောကြာနေ့တို့တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ကျင်းပပါသည်။ ဝါတွင်းကာလတွင် အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်းများ၏ ကျောင်းပိတ်ရက်များဖြစ်သည့် တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် ဥပုသ်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပါသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းကို နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မကွေးနှင့် မော်လမြိုင်မြို့များရှိ စာစစ်ဌာန(၅)ခုတွင် တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲ စစ်ဆေးရာတွင် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် သုတရေးရာ မေးခွန်းလွှာ(၃)ခုတို့ကို(၂)ရက် စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပထမရက်တွင်မြန်မာစာမေးခွန်းကို ၀၉:၀၀နာရီမှ ၁၁:၀၀နာရီအထိလည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်းကို ၁၃:၀၀နာရီမှ ၁၅:၀၀နာရီအထိလည်းကောင်း၊ ဒုတိယရက်တွင် သုတရေးရာ မေးခွန်းကို ၀၉:၀၀နာရီမှ ၁၁:၀၀နာရီအထိလည်းကောင်း စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပြည်ပစာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်၍ စစ်ဆေးရွေးချယ် ပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ တရားဝင်အမှာစာဖြင့် ညှိနှိုင်းမေတ္တာရပ်ခံလာပါက သီးခြားအစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံရှိမြန်မာသံရုံးများတွင် စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ် ကျင်းပ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test) အတွက် အခြားဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့ အစည်းများအတွက် စစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့ပင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ရေးဖြေစာမေးပွဲ၌ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်းသည် (၃)နာရီ (၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီ အထိ) ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ကာလရှည်ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်နေသူများ (သို့မဟုတ်) အလားတူ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် လျာထားခံရသူများ၊ ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရသူများကို ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲများသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
ဒုတိယအဆင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့ စစ်ဆေးမှုခံယူရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါမည်။ စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများအမည်စာရင်း ကြေညာချက်ကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ရုံးအမှတ်(၁၇)၊နေပြည်တော်ရှိ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website နှင့် Facebook တို့တွင် လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည့်သူ တစ်ဦးချင်းစီထံသို့ စာတိုက်မှ တစ်ဆင့်စာပို့၍အချိန်မီ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည့်သူများသည် ကြေညာချက်ပါ ပထမရက်တွင် စိတ်အခြေအနေစစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး နံနက်ပိုင်း၌ စိတ်စစ်ဆေးရေးဌာနစိတ်မှ ပြုစုထား သည့် မေးခွန်းပုံစံများကို ရေးဖြေ ဖြေဆိုရပါမည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စိတ်စစ်ဆေးရေး အရာရှိက နံနက်ပိုင်းတွင် ဖြေဆိုခဲ့သည့်အဖြေလွှာကို အခြေခံ၍တစ်ဦးချင်းကို လူတွေ့စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ နံနက်ပိုင်းရေးဖြေနှင့် မွန်းလွဲပိုင်း လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းတို့မှရရှိသည့် စိတ်အခြေအနေ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို ဒုတိယနေ့လူတွေစစ်ဆေးမည့် အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ တင်ပြထားမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယရက်တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရန် လာရောက်ကြသည့်သူများကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များက လူတွေ့စစ်ဆေး၍အကဲဖြတ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တည်ဆဲအကဲဖြတ်ချက်များ၌ လူအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဗဟုသုတစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းဗဟုသုတနှင့် အခြားပညာရပ်/ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ
ပညာဘွဲ့ ရွေးချယ် ကျား မ
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ၆၁ ၂၃ ၃၈
စီးပွားရေးဘွဲ့ ၃၅ ၅ ၃၀
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့တစ်ခုခုနှင့်အခြား ၁၀၈ ၂၈ ၈၀
ဆေးပညာဘွဲ့ (ဆရာဝန်) ၃၃၈ ၁၈၇ ၁၅၁
ဥပဒေ/မဟာဥပဒေဘွဲ့ ၃၀ ၁ ၂၉
မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ၁၈ – ၁၈
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာ) ၂၇ ၂ ၂၅
ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာ) ၁၀ – ၁၀
စုစုပေါင်း ၆၂၇ ၂၄၆ ၃၈၁
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ (Location Map)
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့
ဝန်ထမ်းရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန
Contact address of the Union Civil Service Board
Copyright © 2022 Union Civil Service Board. All rights reserved.
Office No. 17, Naypyitaw, Myanmar. Phone :067-409057, 067-409190. Fax :067-409045, email:ucsb@mptmail.net.mm